FADLIGA IYO MUCJISADA QURAANKA | Akhriste kusoo dhowow ceerigaabo!
Akhriste kusoo dhowow ceerigaabo!
ciidamadii dalka soomaaliya (daawo)
SOMALi – waa Kuma? (daawasho) RIIX.
Xoogii Dalka Soomaaliya – Kommandos
Ciidamadii xooga Dalka Somalia (TAANGIYO)RIIXHALKA
Komaandooskii maska cuni jiray
Ciidamadii xooga Dalka Somalia
Taariikhdii Somalia Somali history 1960-91
Abdi Bile Abdi Halyeey Somalia
Qabyo 2 II sangub nakruuma fartuun birimo
Jaceyl cidna ma daayo
Jacayl cidna ma daayo..!! (Qaybta.3)
Jacayl cidna ma daayo (Qaybtii 4-aad)
Jacayl cidna ma daayo..!!(Qaybtii 5-aad)
Jacayl cidna ma daayo..!! (Qaybtii -6-aad)
Jacayl cidna ma daayo..!! (Qaybtii 7-aad)
Jacayl cidna ma daayo..!! (Qaybtii 8-aad)
FADLIGA IYO MUCJISADA QURAANKA
Sida lawada ogsoon yahay quraanku waa daawo iyo mucjiso miiran. Wuxuuna daawo u yahay qofkii ku dhaqma, ee qof walba daawo uma ahan. Marka waxaan jeclaadey inaa halkaa ku soo gudbiyo aayadaha iyo suuradaha quranka ugu fadliga badan.
FADLIGA FAATIXADA LEEDAHAY:
Asaxaabiga Abuu sacid oo Rasuulka SCW misaajidka kula jira wuxuu yiri: Rasuulkaa wuxuu igu yiri: “Abuu sacidow ma waana ku bareyn quraanka suurada ugu wayn intaana misaajidka ka bixin,” markaas aan xoogaa joognay ayaan waxaa arkay Rasuulka SCW oo bixi raba, markaas inta qabtay ayaan Rasuulka ku iri: “miyaadan iga balan qaadin inaa I bartid suurada quraanka ugu way intaana misaajidka ka bixin?” Markaasaa Nebigu yiri: “(1)Waa alxamdu lilaahi rabil caalamiin, (2) Sabcu mathaanii, (3) Wal quraani cadiim.” Marka waa Faatixada, saddexdaa magacna ayadaa leh.
FADLIGA AAYATUL KURSIGA LEEDAHAY:
Asaxaabiga Ubayi waxaa laga wariyey nuu yiri: Rasuulkaa wuxuu yiri isagoo waydiinaya su’aal asaxaabigaas: “Abaa mundirow! magaraneysaa kitaabka Alle (quranka) aayada ugu fadliga badan? Markaasuu saxaabiga ku jawaabey: Ilaahey iyo Rasuulkiisa garanaya. Saa mar labaad ayuu Rasuulka SCW ku celiyey su’aashaad kor ku xusan. Markaasuu Abaa mundir yiri: “haa, waa aayatul kuris”, markaas Rasuulka SCW farxad darteed buu gacanta si naxariis leh fiiraha uga dhuftay, wuxuuna yiri: “cilmi ayaan kuu hanbalyeynaayaa Abaa Mundirow.”
FADLIGA LABADA AAYADOOD OO U DANBAYSA SUURATUL BAQRA:
Rasuulka SCW wuxuu yiri: “Habeen qofka aqriya labada aayadood ee suuratul baqara u danbaysa ku falin.” Macnaha waxay uga filan yihiin qiyaamu leylka iyo sharta insiga iyo jinniga….labada nooc waa suura gal, intaba waa la yiri.
FADLIGA LABADA AAYADOOD OO BAQARA U DANBEEYA IYO FAATIXADA OO LA ISKU DARAY:
Cabbaas waxaa yiri: Waxaa is ag fadhiyey Nebiga iyo Maliku Jabriil, ayagoo is ag fadhiya ayaa waxay maqleen albaab laga furay samada shanqartiisa, markaas Malaku Jabriil ayaa cirka fiiriyey, oo yiri: “Sharqartaa maqlaysid waa albaab samada ku yaal, oo manta ka horna aan la furin.” Markaasaa albaabkii cusbaa malagbaa ka soo dagay. Markaasaa Jabriil Nebiga u sheegay, oo ku yiri: “Albaabkii cusbaa waxaa ka soo baxay malag, malagaas oo aan waligiis maanta ka hor u soo bixin dhulka.” Markuu Jabriil war bixintaa siiyey Nebiga SCW ayaa malagii cusbaa Nebiga ayuu salaamay, wuxuuna malagii yiri: “Waxaa ku bishaareysataa labo nuur oo adiga lagu siiyey, oo aan Nebi kaa horeeya la siiyay jirin waa suuratut faatixa & labada aayadood oo baqara ugu danbeeya.” Intaa markuu Malagii Nebiga u sheegay wuxuu ku daray: “Hal xaraf oo ka mid ah aqrin maysid ilaa waa lagu siinayaa.” Macnaha waxaa laga wadaa faatixada iyo labada aayadood waa duco oo haddaa aqriso ducadaas waa lagaa aqbalayaa. Marka halkaa waxaa ku ogaanay faatixada iyo labada aayadood oo baqra ugu danbeeya inay duco yihiin, oo haddaa aqrisid ducadaa farta lagaa saaraayo.
FADLIGA SUURATUL KAHFI: 10KA AAYADOOD OO UGU HOREEYA.
Rasuulka SCW wuxuu yiri: “Qofkii dusha ka xifdiya tobanka aayadood oo suuratul Kahfi ugu horeeya, waxaa laga badbaadiya sharta ninka il cawir.” Gaalkii dhibta badnaa 10ka aayadood oo suuratul Kahfi u horeysa ninkii dusha ka qabta shartiisii wuu ka badbaadey.
FADLIGA SUURATUL FATXI (INAA FATAX):
Cumar Ibnu Khadaab (A.K.N) wuxuu yiri: waxaan u imaaday Rasuulka SCW markii xudaybiya laga soo laabtay oo aan wali wadada ku sii jirno, markaasuu Nebigu wuxuu yiri: “Habeenkaan waxaa la igu soo dajiyey suurat, suuradaasoo aan ka jeclahay adduunka waxa yaal kuligiis.” Markaasuu aqriyey Suuratul Fatxi. (inaa fatax).
FADLIGA SUURATUL TABAARAK:
Rasuulka Alle SCW wuxuu yiri: “Hal suurat quraanka ku jirta, oo sodon aayadood ah, saaxiibkeed way u shafeeco qaadaa maalinta qiyaame, ilaa shafeecadeeda laga aqbalo, suuradaasna waa Tabark.”
FADLIGA SUURATUL KAAFIRUUN (qul yaa ayuhal kaafiruun):
Rasuulka SCW wuxuu yiri: “Suurada Kaafiruun layiraahdo waxay u dhigantaa quraankoo afar loo qaybiyey qeyb ka mid ah.”
Aanis Ibnu Maalik wuxuu yiri: Nebiga wuxuu yiri: “Suuratul Kaafiruun waxaa aqridaa goortaa seexaneysid maxaa dhacay qofkii aqriya suuradaas shirki banaankuu ka yahay.”
FADLIGA QULHU WALE:
Sacidul Qudriye wuxuu yiri: Rasuulka SCW wuxuu yiri: “Ilaaha nafteydu gacantiisa ku sugan tahay ku dhaartaye; suuratu qulhu wale waa thulathul quraan.”
Xadiis kale oo Abu Hureyra warinaayo wuxuu yiri: Rasuulka SCW wuxuu yiri: “Qulhu walaahu axad waa saddex meelloo meel quraanka.”
FADLIGA LABADA MUCAWADATEEYN (suuratul falaq iyo suuratul naas):
Asaxaabiga Cuqba layiraahdo wuxuu yiri: Rasuulka SCW wuxuu igu yiri: “Cuqbow miyaadan ogeyn 11 aayadood habeenkii xalay ahaa in la igu soo dajiyey, 11kaas aayadoodna wax la mid ah aan waligeed horay loo arkin waa Qul acuudu bira bil falaq iyo Qul acuudu bira binaas.”
Sidoo kale Cuqba wuxuu yiri: anigoo Nebiga SCW la socdo, oo meel maka u dhaw mareena, saa waxaa imaatay dabeyl xun, oo mugdi iyo modow daran wadata, markaas Rasuulka SCW wuxuu guda galay inuu Alle magan galaayo, oo akhrinaayo Qul acuudu bira bil falaq iyo Qul acuudu bira binaas. Markuu Nebiga labadaa suuradood Alle ka magan galay, wuxuu yiri: “Yaa Cuqma, labadaan ku magan gal, waayo Ilaah mid magan gala wax labadaan la mid ah oo ku magan galo maba jireen.”
Raadcelis ( 0 )
Faallooyin ( 0 )
Waa inaad soo gashaa si aad faallo u qortid.
Golaha Wasiirada dowladda KMG ee Soomaaliya oo maanta ansixiyay in dowladda KMG ay soo samayso lacago cusub oo uu yeesho dalka Soomaaliya.
MAJSA’ATA IBNU THAWR AL-SADUUSI
Daawo Buurta Dallo billicda Allah Subxaana Watacaalaa ku banaystay
ciid mubaarik ciid mubaarik ciid mubaarik